Andrefan’Ambohijanahary omaly ny avy eo anivon’ny fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana na F3M fa hisy toromarika lehibe hampitaina amin’izy ireo ny zoma izao eny Ankatso. Antony, hoy izy ireo, dia ho fanoherana ny fampiatoana nataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny momba ny fanomanana fisotroan-dronono na “indemnité d’installation à la retraite”. Nampatsiahivin’izy ireo fa araka ny naoty navoakan’ny minisitera tompon’andraikitra tamin’ny fotoana androny na MEF ny 5 aprily 2019, izay nosoniavin’ny DGFAG ary manohitra ny didim-panjakana laharana 2003-993 tamin’ny 7 oktobra 2003 izay milaza fa zon’izy ireo tanteraka sy ara-dalàna izany no anton’izao. Manentana antsika nisotro ronono rehetra tsy an-kanavaka manerana ny nosy, hoy ny F3M, hiray hina hanery amin’ny lafiny rehetra an’ity fitondrana ankehitriny ity mba handoavany an’io ambim-bolantsika io ao anatin’ny fotoana fohy. Nampita hafatra manokana tamin’ny filohan’ny repoblika, Andry Rajoelina, mihitsy moa izy ireo ary nilaza tsy am-pihambahambana fa mampahantra azy ireo ny ataon’ny fitondrana ankehitriny ary tsy misy fahavalon’ny mpiasam-panjakana afa-tsy izay mampahantra azy. Raha tsy tiana ny hisian’ny hetsika mafimafy kokoa, hoy hatrany ny F3M, dia haloavy ireo tokony ho anjaranay.